मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः को हटे, को–कोले पाए मौका? (नामसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः को हटे, को–कोले पाए मौका? (नामसहित)
काठमाडौं– लामाे समयदेखि हुने भनिएकाे मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन भएकाे छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन् ।
बालुवाटार स्राेतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्रीलाई हटाएका छन् भने केहीलाई नयाँ नियुक्त गरेका छन् ।
केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा सूची पठाएका छन् । बुधबार साँझ पठाइएको सूची औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।
याे पनि पढ्नुस नेकपा विवादः अन्त्य कि स्थगित ? यसरी हुँदैछ सहमति
प्रधानमन्त्री ओलीले बसन्त नेम्वाङ, घनश्याम भुसाल, हृदयेश त्रिपाठी र पार्वत गुरुङलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यस्तै लेखराज भट्ट र रामेश्वर राय यादव पनि मन्त्री भएका छन् । हेर्नुस्– कसले कुन मन्त्रालयले पाएमा?
ट्याग्स: केपी शर्मा ओली, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन